Xukun lagu riday askari laba kun Shillin Soomaali ah u dilay qof Shacab ah. | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA Xukun lagu riday askari laba kun Shillin Soomaali ah u dilay qof...
Xukun lagu riday askari laba kun Shillin Soomaali ah u dilay qof Shacab ah.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya ayaa Maanta waxaa ay xukun ku riday Askari ka tirsan Ciidanka Booliska Soomaaliya oo Isgoyska Ceel-gaabta ee Muqdisho si bareer ugu dilay Nin Odey halkaas ku lahaa goob yar oo Ganacsi.
Nuur Daahir Geedi oo ah Askariga dilay Marxuumka oo lagu magacaabi jiray Cumar Xasan Macalin ayaa qirtay inuu ka dambeeyay falkaas, isagoo u dilay muran ka dhashay laba kun oo shilin Somaali ah oo Odeyga kaga iibsan lahaa sigaar,sida ay sheegtay Xeer ilaalinta Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida.
Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay in Dable Boolis Nuur Daahir Geedi oo ka tirsan Saldhiga Booliska degmada Shangaani uu 16-kii Bishii June ee sanadkan Isgoyska Ceelgaabta ku dilay Nin Odey halkaas ku lahaa goob yar oo Ganacsi,isla markaana Maxkamadda Ciidamada ay ku riday xukun dil toogasho ah.
Previous articleIlhaan Cumar” Mareykanka waa in uu magdhow siiyaa dadka ku waxyeelooba duqeymaha Somalia”
Next articleMadaxweynaha Hir-Shabeelle oo gaaray Dhuusamareeb